नेपालका मदिरा पसलमा बिहानैदेखि भारतीयको भीड
नेपालका मदिरा पसलमा बिहानैदेखि भारतीयको भीड	By नवीन सन्देश on	६ आश्विन २०७३, बिहीबार ०९:२२
काठमाडौँ । नेपाल भारतको सीमामा पर्ने धनुषाको जटही नाकामा दैनिक बिहानदेखि नै भारतीय युवाको भीड लाग्छ ।
युवाहरु भारतीय सवारीसाधन सीमामा ल्याएर मदिरा पिउँदै रमाइलो गर्छन् । भारतको बिहार राज्यमा मदिरा प्रयोग तथा बिक्रीवितरण प्रतिवन्ध लागेपछि मदिरा पिउन भारतीय युवा तराईका सीमा क्षेत्रमध्ये जटहीमा आउने गरेका छन्।
बिहानदेखि रक्सी पसल भरिभराउ हुने र साँझमा सबै खाली हुने गरेको जटही भन्सार कार्यालयका सहायत वैद्यनाथ लाल कर्ण बताउँछन् ।उनका अनुसार साँझको समयमा भारतीय नाकामा जाँच गर्न सुरक्षाकर्मी आउने भएकाले युवाहरु मदिरा पिउन विहानै आउने गरेका हुन् ।
विहान १० देखि १२ बजेत्रिै भारतीय गाडी लिएर आउने गरेका युवा रक्सी लिएर फर्किन्छन् । अन्नपूर्ण
तपाइँकॊ प्रतिक्रिया : Related Posts १६ जेष्ठ २०७४, मंगलवार १०:५७ 0	हत्या भएको ३८ वर्षपछि काजकिरिया
१६ जेष्ठ २०७४, मंगलवार १०:५० 0	राष्ट्रकवि भन्छन्- आश्चर्य भो ! आफैं मरेको खबर सुन्न पाइयो !
१५ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०९:१४ 0	रेणु दाहाल भन्छिन्- मैले जित्न लागेपछि एमालेका साथीहरु आत्तिनुभयो